sasanaramsivihara - click here for more events!
sasanaramsivihara - click here for archive!
ဝါဆိုလပြည် ဓမ္မစကြ်ာ အခါတော်နေ့ တရားတော်
( စတုတ္ထနေ့ )
သာသနရံသီ မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာစင်တာကြီး
၁၃၈၂ ခု ၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ( ၃ )ရက်နေ့ ၊
ဩဂုတ်လ ( ၆ ) ရက် ၂၀၂၀၊
Sasana Ramsi Vihara was live. 15 Comments
သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား🙏🙏🙏
( တတိယနေ့ )
ရဟန်းတော်၊ သာမဏေများ ဝါဆိုဝါကပ်တော်မူကြမည့်
ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ ၁၃၈၂ခု
ဩဂုတ်လ ( ၅ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 16 Comments
သာ ဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား
( ဒုတိယနေ့ )
ဩဂုတ်လ ( ၄ ) ရက် ၂၀၂၀
( ပထမနေ့ )
ဩဂုတ်လ (၃)ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 21 Comments
သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓုပါ ဘုရား🙏🏼🙏🏼🙏🏼သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏
ဩဂုတ်လ၃ ရက် ၂၀၂၀
၁၃၈၂ ခု ဒုတိယဝါဆိုလပြည့် တနင်္လာနေ့
သာသနရံသီမြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာစင်တာကြီး လန်ဒန်မြို့
Sasana Ramsi Vihara was live. 30 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားToday is my birthday phon phon thank you🌷သာဓု🙏🌷သာဓု🙏🌷သာဓု🙏ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏
၂၅ ကြိမ်မြောက် လန်ဒန်မြို့ သာသနရံသီ ဝိဟာရ၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲနှင့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ၏ သက်တော်(၆၂ )ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အထိမ်းအမှတ်ပူဇော်ပွဲ
ဩဂုတ်လ ၂ ရက် ၂၀၂၀
ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၄ ရက် ၁၃၈၂ခု
Sasana Ramsi Vihara was live. 39 Comments
5ပါးသီလကိုအိုင်ယာလန်ကနေlive နဲ့အဝေးကဘဲဆောက်တည်ခံယူလိုက်ရပါတယ်ဘုရား ဆရာတော်ဘုရားကျန်းမာပါစေ သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား အိမ်ကနေ ရေစက်ချ တရားနာယူပါတယ် 🙏🙏🙏 ဆရာတော် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ၊ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေဘုရား၊🙏🙏🙏
မြတ်စွာဘုရားရှင် အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးဆောက်လုပ် လှူဒါန်းထားသော သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီး၌ (၃၈ )ပါးမင်္ဂလာတရားများကိုဟောကြားတော်မူရာတွင်
၃၅။လောကဓံ တရား(၈)ပါးနှင့်​တွေ့ကြုံရသော် စိတ်၏တုန်လှုပ်မှုမရှိခြင်း မင်္ဂလာ ၃၆။ စိုးရိမ်မှုကင်းခြင်း အသောက မင်္ဂလာ၃၇။ ကိလေသာ တဏှာရမ္မက်ဟူသော မြူအညစ်အကြေး မရှိခြင်း ဝိရဇ မင်္ဂလာ ၃၈။ ဘေးရန်ကင်းကွာခြင်း ခေမ မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
ဩဂုတ်လ ( ၁) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was ... 11 Comments
သာ ဓု သာဓု သာ ဓု ပါ ဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဘုရား🙏
( အဋ္ဌတိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၃၁ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi ... 13 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု 🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
( သတ္တတိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၃၀ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi ... 15 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
( ဆတ္တိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၂၉ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi ... 10 Comments
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
၃၂။ ခြိုးခြံစွာကျင့်ရခြင်း တပမင်္ဂလာ ၃၃။ မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း ဗြဟ္မစရိယ မင်္ဂလာ ၃၄။ အရိယသစ္စာတရားတို့ကို သိမြင်ခြင်း အရိယသစ္စ မင်္ဂလာ ၃၅။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရခြင်း မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
( ပဉ္စတ္တိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၂၈ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 19 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု ပါ ဘုရား🙏🙏🙏
( စတုတ္တိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၂၇ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 13 Comments
သာဓုသာဓုသာဓု🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
( တေတ္တိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၂၆ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 18 Comments
🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
( ဒွတ္တိံသ နေ့)
ဂျူလိုင်( ၂၅ ) ရက် ၂၀၂၀
Sasana Ramsi Vihara was live. 12 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏
၂၈။ သည်းခံခြင်း ခန္တီမင်္ဂလာ ၂၉။ ဆိုဆုံးမရ လွယ်ကူခြင်း မင်္ဂလာ ၃၀။ ဘုရား ၊ ရဟန္တာ အရိယာသူတော်စဉ်များ ရဟန်းသံဃာတော်များကို ဖူးမြင်ရခြင်း သမဏာနဉ္စဒဿန မင်္ဂလာ ၃၁။ သင့်လျော် လျောက်ပတ်သောအခါ၌ တရားစကားဆွေးနွေးရခြင်း မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၂၄ )ရက် ၂၀၂၀
Sasana ... 17 Comments
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား🙏🏼သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏
ဂျူလိုင်( ၂၃ )ရက် ၂၀၂၀
Sasana ... 15 Comments
တရားနာပါတယ္ဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားThadu Thadu Thadu Par Phayar
ဂျူလိုင်( ၂၂ ) ရက် ၂၀၂၀
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ဂျူလိုင်( ၂၁ ) ရက် ၂၀၂၀
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား
ဂျူလိုင်( ၂၀ ) ရက် ၂၀၂၀
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓုပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
၂၆။ ။ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း ကတညုတ မင်္ဂလာ ၂၇။ သင့်လျော်သောအခါ တရားနာကြားခြင်း ဓမ္မဿဝန မင်္ဂလာအကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၉) ရက် (အာဇာနည်နေ့ ) ၂၀၂၀
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
ဂျူလိုင်( ၁၈ ) ရက် ၂၀၂၀
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
၂၅။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း သန္တုဋ္ဌီ မင်္ဂလာ၂၆။ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း ကတညုတ မင်္ဂလာ ၂၇။ သင့်လျော်သောအခါ တရားနာကြားခြင်း ဓမ္မဿဝန မင်္ဂလာအကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၇ ) ရက် ၂၀၂၀
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
၂၄။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း နိဝါတ မင်္ဂလာ ၂၅။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း သန္တုဋ္ဌီ မင်္ဂလာ၂၆။ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း ကတညုတ မင်္ဂလာ ၂၇။ သင့်လျော်သောအခါ တရားနာကြားခြင်း ဓမ္မဿဝန မင်္ဂလာအကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၆ ) ရက် ၂၀၂၀
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု🙏🙏🙏
၂၃။ ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေရခြင်း ဂါရဝ မင်္ဂလာ ၂၄။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်း နိဝါတ မင်္ဂလာ ၂၅။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း သန္တုဋ္ဌီ မင်္ဂလာ၂၆။ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း ကတညုတ မင်္ဂလာ ၂၇။ သင့်လျော်သောအခါ တရားနာကြားခြင်း ဓမ္မဿဝန မင်္ဂလာအကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၅ ) ရက် ၂၀၂၀.
... 20 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား
ဂျူလိုင်( ၁၄ ) ရက် ၂၀၂၀.
... 18 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရားသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🌷🌷🌷🌹🌷🌷🌷
၂၁။ ကုသိုလ် တရားတို့၌ မမေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၃ ) ရက် ၂၀၂၀.
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👏👏👏🌺🌺🌺
၂၀။ မူးရစ်မေ့လျော့စေတတ်သော သေရည် အရက်စသည်တို့ကို သောက်ခြင်းမှ စောင့်စည်းခြင်း မဇ္ဇပါန သံယမ မင်္ဂလာ၊ ၂၁။ ကုသိုလ် တရားတို့၌ မမေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
ဂျူလိုင်( ၁၂ ) ရက် ၂၀၂၀.
Sasana Ramsi Vihara was live. 17 Comments
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘုရားသာ ဓု သာဓု သာဓုသာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား
Dear Ye Ye Aung,
Whatapainful loss!
Kindly accept our sympathy over the passing on of your husband, U Myo. We pray that you will be comforted by heaven.
Venerable U Uttara and trustees 8 Likes
၁၉။ မကောင်းမှုမှ စိတ်ဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ပါ့ပအာရတိ မင်္ဂလာ
မကောင်းမှုမှ ကိုယ် ၊ နုတ် တို့ဖြင့် ရှေင်ကြဉ်ခြင်း ပါပဝိရတိ မင်္ဂလာ
၂၀။ မူးရစ်မေ့လျော့စေတတ်သော သေရည် အရက်စသည်တို့ကို သောက်ခြင်းမှ စောင့်စည်းခြင်း မဇ္ဇပါန သံယမ မင်္ဂလာ၊ ၂၁။ ကုသိုလ်တရားတို့၌ မမေ့လေဖာ့ခြင်း အပ္ပမာဒ မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
သာသနရံသီ ... 17 Comments
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏
၁၉။ မကောင်းမှုမှ စိတ်ဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ပါပအာရတိ မင်္ဂလာ
မကောင်းမှုမှ ကိုယ် ၊ နုတ် တို့ဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ခြင်း ပါပဝိရတိ မင်္ဂလာ
၂၀။ မူးရစ်မေ့လျော့စေတတ်သော သေရည် အရက်စသည်တို့ကို သောက်ခြင်းမှ စောင့်စည်းခြင်း မဇ္ဇပါန သံယမ မင်္ဂလာ၊ ၂၁။ ကုသိုလ်တရားတို့၌ မမေ့လျော့ခြင်း အပ္ပမာဒ မင်္ဂလာ အကြောင်းတရားတော်
သာသနရံသီ ... 14 Comments
သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု ပါဘုရား🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏